शिवको झटारो वर्षा राउतलाई ? भन्छन् ‘डबिङमा समय नदिने कलाकार नै हैन’ – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/शिवको झटारो वर्षा राउतलाई ? भन्छन् ‘डबिङमा समय नदिने कलाकार नै हैन’
पछिल्लो समय नेपाललगायत विश्वका धेरै देशहरुमा कोरोना महामारीको प्रभाब निकै पर्न गयो । देशका धेरै व्यापार ब्यबसाय देखि लिएर फिल्म क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पर्यो । कुनै पनि फिल्म हलमा प्रदर्सन हुन सकेनन । तर पनि नया-नया म्युजिक भिडियोले भने बजारमा राम्रै भाउ कामाउन सफल भयो । बिस्तारै देशमा लकडाउन खुले संगै विभिन्न हलहरुमा नया फिल्म लगाउनु पर्छ भन्ने फिल्मकर्मीहरुको आवाज उठ्यो ।